May 5, 2018 | Kichuu
Oromo: Call for actions against all instruments of genocide in Oromia By Aba Orma, May 5, 2018 Protecting your family and livelihood is a universal right! The Oromo people do not have partner in the [Read More]
Mining Firm’s License Renewal Fuels Protests in Ethiopia (Voanews) —Demonstrators have taken to the streets in at least a dozen southern Ethiopian towns this week to protest the federal government’s renewal of a license for [Read More]
Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 5 May 2018 Buttaa- Jilli Buttaa jila sirna gAdaatti seenuuf gaggeeffamuu dha. Yeroo Gadaatti seenan Buttaa Qalan. https://t.co/uNsTqqKkLL pic.twitter.com/LDIGzBxDub — Kichuu (@kichuu24) May 5, 2018 Caamsaa 5/2018 Godina Baalee Roobeetti [Read More]
Qabsoon Qeerroon aarsaa guddaa itti kafalte akkasitti isaan yaamsise! Itti Muddi Qeerroo!!
Qabsoon Qeerroon aarsaa guddaa itti kafalte akkasitti isaan yaamsise! Itti Muddi Qeerroo!! Ahmed Kassim ﻿ Qeerroo bilisummaa Balee irraa. #Balee Roobeetti mormii cimman itifufee jiraa. OPDON hardha afaaniin WARQII si uffisuu ni dandeettii . Uuffisuu qofaas [Read More]
Haasawa obbo Lammaa Magarsaa har’a Baale, magaalaa Roobetti godhe keessaa
Haasawa obbo Lammaa Magarsaa har’a Baale, magaalaa Roobetti godhe keessaa “Nuti qabsaawonni har’aa dhugaaf falmachuu, haqa ofiirratti du’uu, amaanaa lammii eeggachuu, maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jennee saba keenyaaf falmuu … kana booda Oromiyaan [Read More]
Buttaa- Jilli Buttaa jila sirna gAdaatti seenuuf gaggeeffamuu dha. Yeroo Gadaatti seenan Buttaa Qalan.
Buttaa– Jilli Buttaa jila sirna gAdaatti seenuuf gaggeeffamuu dha. Yeroo Gadaatti seenan Buttaa Qalan. Sirni kun Godina Wallaga Lixaa Aanaa Laaloo Asabii magaala Innaangootti gaggeeffamuuf jira. Innaangoon bakak seena qabeessa; bara qabsoon Oromoo bifa ammayyaatiin [Read More]
Gooticha Oromoo Baqqalaa Garbaa USA seene! Qabsoon itti fufa!
Gooticha Oromoo Baqqalaa Garbaa USA seene! Qabsoon itti fufa! #Nuhoon Akkaa Leencaati Bookisa Kalees Arras Bara Tokkummaan Oromoo itti leelise
Haasaa M/M/Itiyoophiyaa Dooktar Abiyyi Ahimad-magaalaa Roobeetti Haasaa M/M/Itiyoophiyaa Dooktar Abiyyi Ahimad ==================================== [OBN 27 08 2010] Waldaalee IMX Oromiyaa guddisuuf, beekkamtii fi badhaasa kennuuf magaalaa Roobeetti qophaa’e irratti haasaa M/M/Itiyoophiyaa Dooktar Abiyyi Ahimad taasisan. Guyyaa [Read More]